कृषिमा २ करोड खर्च गर्दै गन्यापधुरा गाउँपालिका «
कृषिमा २ करोड खर्च गर्दै गन्यापधुरा गाउँपालिका
डडेल्धुरा : रोजगारी र उत्पादन बढाउन गन्यापधुरा गाउँपालिकाले करिब २ करोड खर्च गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपालनतर्फ गाउँपालिकाले करिब २ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष नबल मल्लले बताए ।
कोरोना भाइरसका कारण भारतलगायत अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाई घर फर्किएका करिब २२ सय स्थानीय छन् । रोजगारीका लागि भारतलगायत अन्य मुलुकमा गएकाहरूको संख्या ३ हजार ५ सय छ । यो संख्यामध्ये २२ सय स्थानीय घर फर्किएको उनले बताए । रोजगारी गुमाई घर फर्किएका र घरमै पनि बेरोजगार स्थानीयलाई कृषि र पशुपालनको उत्पादनसँग जोड्ने योजना गाउँपालिको छ । सामूहिक कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका फर्ममा लगानी गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए ।
एउटा फर्ममा २५ लाखका दरले लगानी गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ । उनले भने, प्रत्येक वडामा एउटा कृषि र एउटा पशुपालनको फर्ममा लगानी गर्ने छौं । गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा कृषि पशुपालनका फर्म बनाइ युवालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने उनको भनाइ छ । स्थानीयहरूले कामको सुरुवात पनि गरिसकेका छन् । कृषि, पशुपालनफर्मलाई २५ लाखसँगै सिँचाइ पोखरी, मल, बीउ, कृषि औजारमा गरी करिब २ करोड बजेट कृषि पशुपालनतर्फ रहेको अध्यक्षमल्लले बताए ।
वडा नं. १ को लकतडामा भागेश्वर कृषिफर्म छ । त्यहा भैंसी पालन गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ । सुकतडा र बन्तडीमा कृषिको पकेट क्षेत्र बनाई आलुमा लगानी गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ । यस्तै वडा नं. २ को पारिखेतमा तरकारी उत्पादन र कुजाकोटको कुजाकोट कृषिफर्म भित्र व्यावसायिक रूपमा भैंसी पालन गर्ने । वडा नं. ३ को सेल्तडामा तरकारी खेती गर्ने, तरकारीको पकेट क्षेत्र बनाउने । डर्मत भन्ने ठाउँमा स्थानीय युवाले धेरै ठूलो जोश जाँगर देखाएका छन् । उनीहरूलाई भैंसी, गाई, कुखुरा, बुंगर पालनमा सघाउने । वडा नं. ४ को वनतोलमा वर्षाैंदेखि बाँझो १५० रोपनी जमिनमा स्थानीयले आलु खेती सुरु गरेका छन् । त्यहाँ भैंसी, बाख्रापानलको राम्रो सम्भावना छ । यसमा सहयोग गर्ने ।
र वडा नं. ५ को सल्कोट क्षेत्रमा स्थानियले प्रशस्त तरकारी खेतीलगायत कृषिकार्यको प्रचुर सम्भावना छ ।